Manao fanambarana fa hilatsaka ary ny sasany dia aorian’izay vao mitady mpiara-miombon’antoka kanefa dia ny ho tonga filohan’ny repoblika no tanjony. Mety azo leferina ny fihetsika toy izany raha depiote sy ben’ny tanàna fa midika ho tsy fahamatorana sy fanaovana tsinontsinona ny hasin’ny politika eto Madagasikara kosa raha fifidianana filoham-pirenena no hanaovana fomba mikivalavala. 3 volana alohan’ny fifidianana, ao anatin’ny fotoana handraisana dosie, dia efa miseho sahady ny fampizaran-dratsy vahoaka. Ny sasany nanatsoaka dosie, ny hafa malaza ho tsy nahaloa hofana dokambarotra. Talohan’izao aza, nisy mpitarika sendika mihitsy nilaza hilatsaka satria nangatahana. Miankanakana avy eo rehefa hanontaniana izay mba vinany kanefa hitondra mponina mihoatra ny 25 tapitrisa isa anatina velaran-tany maherin’ny 599.000km2 no tanjona.